Hevitra MPANOHARIANA | Desambra 2008 | 2
Aterineto Malagasy : Mahazo alalana hirediredy
2008-12-17 @ 06:44 in Ankapobeny
Nihora-kafaliana ny tena nandre ny tenin'ny Minisitra Bruno Andriatavison, izay misahana ny fifandraisana, ny paositra sy ny fifandraisan-davitra, milaza fa malalaka ny fitenenana eto Madagasikara ka ohatra amin'izany ny aty amin'ny aterineto izay ahitana ny karazan-kevitra sy fitenenana rehetra; fa anjaran'ny mpampahalala vaovao ny mamoaka na tsia izay voalaza any. Eo amin'ny fiheverany izany dia tsy toerana fakana loharanom-baovao loatra ny eto amin'ny aterineto fa rediredy no betsaka. Teniny nandritra ny fotoana nanontanian'ny mpanao gazety azy momba ny fanakatonana ny Viva TV io.
Hatramin'izao izany dia tsy misy atahorana ny fanehoan-kevitra aty amin'ny aterineto. Mety ho tsotra ny antony, mbola vitsy ny olona mivoivoy amin'itony toerana itony ka ny Malagasy dia ny mijery sy ny mamaky no mahazatra azy kokoa fa tsy ny manoratra loatra. Ankoatra izay Malagasy efa zatra ny manoratra sy maneho ny heviny dia olona tezitra tanteraka na tena faly matoa izy maneho hevitra izay. Midika koa izany fa eo anatrehan'ny mpitondra fanjakana dia tsy matotra tsy misy atahorana loatra koa izay voalaza amin'ny aterineto, satria ny maro amin'ny mpitabataba tsy manisy hisatra (frein) amin'izay ambarany dia olona mipetraka ivelan'i Madagasikara na tsy mbola miseho masoandro tahaka ny sariko ka hitandrina.
Amin'ny ankapobeny izany dia tsy voasokajiny ao anatin'ny fampahalalam-baovao ny bolongana sy ny dinika ary ny karajia amin'ny aterineto. Lafiny tsara ho antsika Malagasy eto an-toerana izany indrindra indrindra, nefa tsy tokony hohararaotina handikana ny lalàna sy ny fitsipika efa napetraky ny serasera ohatra.
Izay no ela fa hirediredy anatin'ny fitandremana ary aho, malalaka aho izany satria tsy misy fahalalahana tsy misy lalàna izany fa baranahiny matoa tsy misy lalàna. Efa nanoratra ny filazan'ny Minisitra ihany aho momba ny Viva TV ka tao no nahenoana fa ankoatra ny famerenana manontolo ilay lahatsary dia nanambara ny mpanao gazety fa mbola averina manontolo indray afaka fotoana fohy amin'iny alin'iny sabotsy iny ihany (sy amin'ny fotoana manaraka) ilay lahatsary. Midika izany ary mivandravandra fa tena natao hanakorontana sy nikendrena handravana ny fihaonana tontosaina anio any Iavoloha mihitsy ny raharaha fa tsy hoe tsy fahaizana mifehy ny fampahalalam-baovao.
Mety hilaza ianao hoe: dia ahoana ireny kabarin'ny filoha na mpitondra fanjakana averimberina ireny. Mazava be, tsy misy fitenenana anaty vaovao hoe averina manontolo ity amin'ny vaovao rahariva na manaraka. Fa mitokelaka tampoka aho mandre ny voalazan'ny gazety La Gazette de la Grande Ile eto ampanoratana hoe: "Hokendren'i Andry Rajoelina ihany koa (izay hanakatonana) ny mbs"... eisy e! tena miaraka adala ireto marina! Efa tamy ihany koa izany ny "mpanao didy jadon(a)" an'Antananarivo e!(mbola tsy mpitondra ny firenena akory!) izany ve no atao hoe valy fingika fingaka? Fa dia efa miomàna aloha ialahy ry jentilisa fa Tsiafahy no miandry an'ialahy rehefa izaho no mitondra an'i Madagasikara, izaho no lazain'ialahy fa mpanao didy jadona sahady eto? Sady tena alaheloko mihitsy ny tsy nahazoako ny Madagascar Tribune teo an!
Na izany na tsy izany tena vao maika mihamitombina ilay ahiahy nandritra ny fifidianana hoe ataon'ny sasany saribakoly ity reharehan'ny tanora ity na misy mpanimpy hoditr'akondro lalandava eo anatrehany. Eto no tena ahatsapana fa ny fahalalahana tsy midika velively fa manao izay tiany atao ny mpiara-miasa amin'ny tena akaiky fa misy fitspika tsara apetraka mazava ihany koa mba tsy hifamitahan'ny mpiara-dia.
Ny antso finday no tena mifaninana
2008-12-13 @ 03:09 in Andavanandro
Tranga iray anisan'ny manova fijery ilay lalao nahoana no hamaham-bolongana ho an'i Afrika iny. Solontenan'ny eto an-tanindrazana ny tena ka manana andraikitra amin'ny fampahafantarana ny zavamisy eto an-toerana. Lavitry ny lalamben'ny serasera ka manjary zavadehibe loatra ho an'ny mieli-patrana manerana izao tontolo izao izay lazain'ny tena. Tsy mahagaga loatra raha nisy ny niangavy mba tsy ho matroka loatra amin'ny filazana ny zavamisy eto an-tanindrazana. Rariny kosa ny azy amin'iny lafiny iray iny.
Fiainana andavanandro ary ny holazaina satria efa tafiditra amin'ny fiainana mahazatra ny olona ny fifampiantsoana amin'ny alalan'ny sofindavitra. Tamin'ny voalohany dia gaga aho fa raha orange miantso orange aho dia Ar8 mahery ny vidin'ny segondra iray; Manakaiky ny Ar500 ny miantso iray minitra izany, kivy ny tena mahita izany. Variana ihany anefa etsy andaniny satria ny antso telma ilay hofain'ny olona ireny dia Ar300 ny antso iray minitra na inona mpandraharaha iantsoanao na inona (nindrana ny fomba fitenin'ny orange azy amin'ny teny malagasy aho eto). Matoa anefa mahavita izany ireny mpampanofa antso ireny dia tsy maty antoka velively izy, maty antoka Ar200 isa-minitra sahady aho izany nefa mpandraharaha mitovy ihany no iantsoako.
Niainga ary ny telma fa raha mampiditra fahana indroa ao anatin'ny andavanandron'ny herinandro ianao dia mahazo fahana maimai-poana Ar2000 iantsoanao mandritra ny faran'ny herinandro. Mifanindran-dalana amin'izany kosa ny Zain dia nanome ny tolotra antsoina hoe voky, izay antso tsy voafetra ataonao mandritra ny andro isoratanao anarana (iantsoana 636 ka miala avy hatrany ny Ar3000 ho sandan'ny antso) manomboka amin'ny 6 maraina ka hatramin'ny 6 hariva. Notohizan'ity mpandraharaha ity tamin'ny tolotra antsoina hoe Club zain ny tantara ka tahaka ny teo ihany fa miala Ar1000 isan'alina isaky ny misoratra anarana satria manomboka amin'ny 9 ora alina ka hatramin'ny 6 ora maraina kosa ity tolotra ity. Ireo izany no nikarakaran'ny zain fatratra ilay indray Sabotsy efa nosoratako iry ka nahahipoka tanteraka ny tambanjotra tamin'io fotoana io. Na dia somary mihena eo anatrehan'ny mpanjifa aza manko ny hery sy ny kalitaon'ny tambajotra (noho ny fitomboan'hamaroan'ny mpanjifa va?) dia tsy mampaninona ny mpanjifa loatra rehefa mahazo mora izy.
Eto dia ny mpampanofa antso indray no tena mahavoa satria lasa mifaninana mampidina ny saran'ny iray minitra raha miantso Zain ilay olona ry zareo. Niainga indray tamin'ny Ar150 izany ho an'ny sasany raha Ar100 isa-minitra kosa ho an'ny hafa ny andro voalohany. Nony tonga ny andro faharoa dia nisy ny nahasahy nampidina hatramin'ny Ar95 ny sasany ka raha mitohy izao dia tsy ho ela akory dia hihena hatramin'ny Ar50 ny isa-minitra satria voaefa ao anatin'ny ora iray ny mason-karenan'ny antso noho ilay sara Ar3000 voatazona mandritra ny 12 ora nolazaiko teo, Ar50 X 60 mn = Ar3000 sa izaho no diso fikajy? Eto ihany koa dia miaiky aho satria raha mividy fahana moov aho hoan'ny aterineto dia Ar20 000 maharitra 8 ora na 480 mn no fanaoko, ka raha kajiana io dia 41.666Ar ny sandan'ny 1mn amin'izany; izany hoe efa resin'ny saran'ny antso finday ny saran'ny aterineto fa raha miantso ora iray aho no atao hoe maty antoka indrindra mandritra ny andro; nefa raha ora folo no iantsoako foana dia lasa Ar5 ny iray minitra, fa raha alaiko daholo ny 12 ora dia Ar4.166 izany. Ny aterineto any amin'ny Cybercafe anefa dia Ar20 na Ar15 ny saran'ny iray minitran'ny serasera ary tsy mahazo latsaky ny Ar300 no aloanao. mahavariana! Eto aloha dia tsara atao iantsoana fotsiny ny findainao fa tsy tsara iantsoana loatra mieritreritra fatiantoka sahady raha tsy maintsy foana e!
Noho ny fifaninanana dia mba manao izay hitazonana ny mpanjifany ihany koa ny orange ka mody niainga amin'ny filazana heveriko ho diso avy hatrany fa olona iray amin'ny telo, hoy izy no tsy orange, ka tsy tokony adinoina ireo olona ireo fa antsoy. Ny azy? Raha miantso amin'ny orange roa minitra ianao dia mahazo antso maimai-poana iray minitra ny ampitso ho an'ny mpandraharaha hafa, izany hoe raha ny fahazoako azy raha miantso ora iray orange ianao dia mahazo atsasak'adiny maimai-poana iantsoana mpandraharaha hafa eto an-tanindrazana ny ampitson'iny antso iny. Tsara aloha rehefa samy miezaka fa mba hahazo tombony aloha ny mpiantso mandra-pahatongan'ny faran'ny taona...
Fa lasa ihany ny saina manoloana izany rehetra izany, inona no mahatonga ireo mpandraharaha amin'ny sofindavitra mikarakra fatratra ny mpanjifa tahaka izao? hisintonana mpanjifa hafa vaovao ve? sa dia izaho no diso fatra-piahiahy loatra amin'izay any ambadika any fa tokony hanana ilay fihevitra hoe hano aloha ny hena fa ho hita eo ihany izay any ambadik'izany na ho dumping na ho zavatra hafa? Nahare siosio, tsy voamarina sady tsy misy hanamarinako azy manko aho fa mety hisy mpandraharaha hafa vaovao hiditra amin'ity sehatra ity amin'io taona ho avy io ka avy any Dubai koa ilay mpandraharaha ary FINE (toa manakaiky ny Zain?) ny anarany. Fifaninanana masina aloha ny amin'iny fa mbola miandry izay avalin'ny mpandraharahan'ny solika eto an-tanindrazana koa ny mpanara-baovao amin'izay avaliny ny famelabelaran-kevitry ny OMH milaza fa mbola midangana loatra ny tombom-barotra azon-dry zareo amin'izao fotoana izao.
Aza andefasana entana aty Madagasikara sy tsy mamaky mailaka aho!
2008-12-07 @ 14:52 in Ankapobeny
Eto ampanombohana dia aleo miaiky fa tsy mpamaky ny mailako isan'andro mihitsy aho. Misy mailaka izay efa folo andro izay no niandrasana valiny ahy fa izao vao hitako, efa anjatony manko no tonga ao, lany anefa ny fahana raha any an-trano no hijery azy fa rehefa misy fahafahana mijery mailaka ihany ato am-piasana vao manararaotra ny mamaky aho. Koa aza tsiny indrindra ho anareo rehetra raha maika hahazo valiny ianareo no tsy voavaliko izany. Lasa eto aho no manao mea culpa. Dia inona izany no tena andaniako ny fahana any an-trano? Ianareo izay tsy mbola mahalala dia mandika ny lahatsoratra teny anglisy ao amin'ny Global Voices Online avadika ho amin'ny teny malagasy aho ka io no tena nakana ny fahana. Manararaotra ary aho eto milaza aminareo izay manana fahafahana kely sy fahalalana teny anglisy mba hifanampy amin'izany. Tsy voatery hoe maimai-poana moa izy io fa mba misy sitrany ahay izay ihany na dia hoe tsy ara-potoana aza ny fahatongavan'izy io teo alohaloha teo. Raha misy ny mazoto dia tsy maninona na manoratra aty aza ianareo (na dia tsy mpamaky loatra ny mailako aza aho) fa izaho no hampita azy any amin'ny tonia. Marihina fa izaho dia tsy havanana loatra amin'ny teny anglisy fa miezaka kosa ny hampahazava ny lahatsoratra amin'ny teny malagasy ihany. Manentana anareo, indrindra izay manana fahafaha-miserasera, hifanampy amin'io vohikala ahafahana mampiely vaovao amin'ny teny malagasy io.
Manaraka izany, faran'ny taona tokoa izao ka ho avy ny fifampiarahabana sy ny fifanolorana fanomezana. Dia mahatsiaro tampoka izay fahasahiranana nanjo ahy aho sy ireo izay efa nitaraina. Raha vola moa no alefanao aty Madagasikara ataoko fa tsy hitako loatra ny olana hatramin'izao aloha. Fa eo amin'ny entana dia tena tantara hafa, no tena reko. Eo akaiky eo manko ny mpiasan'ny fadintseranana, ka tonga dia misy vola aloa aloha arakaraky ny lanjan'ny entana eo ampandraisana azy... ny fanomezana io... rehefa avy eo azo ny entana dia iangaviany ianao hanokatra ilay entana azonao. Raha toa somary misy sanda izay dia lasa mitombo indray ny vola aloan'ilay mpandray entana. Nisy ny nikaikaika fa lasa lafo noho ny vidin'iny entana iny eto an-toerana aza ny vola aloanao, nefa dia olon-kafa no nividy azy ho anao tany ivelany tany hataony fanomezana ho anao. Dia mahatonga ilay fitenenana hoe aleo tsy andefasana entana aty Dago ity fa tahaka ny hanome fahasahiranana sy fandaniam-bola tsy ampoizina indray aza. Na izany na tsy izany dia mbola tsy fantatro izay fiovana aty aoriana aloha fa ... noho ny fanatonan'ny fetin'ny faran'ny taona no nandrisika ahy hanoratra ity aloha.
Marihina fa raha mazoto handika ny lahatsoratra ao amin'ny rohy nolazaiko ianareo dia tsara kokoa manoratra amin'i Lova Rakotomalala. Karohy amin'ny milina fikarohana raha tsy mahadiso aza fady.